Smart cities are the next step for urban tourism post-pandemic | Travel Technology
Home » Travel Technology News » Tanàn-dehibe dia dingana manaraka ho an'ny valan'aretina fizahan-tany an-tanàn-dehibe
Ny fampifangaroana ny haitao sy ny fiaraha-miasa no lafin-javatra roa lehibe izay hitondra any amin'ny fizahan-tany tompon'andraikitra bebe kokoa amin'ny tontolo aorian'ny aretina
Mitohy mamorona lohateny lehibe manerantany ny pasipaoro nomerika 'digital'
Ny 78% amin'ireo mpamaly amin'ny fanadihadiana dia manantena ny teknolojia hanova ny fomba fanaovany ny asany mandritra ny telo taona
COVID-19 dia nitondra fotoana bebe kokoa ho an'ny toeran-kaleha hanamboarana sy hieritreretana ny politikam-pizahantany
Manampy ny traikefan'ny mpitsidika, manalefaka ny vokatry ny fitsidihan'ny overtourism ary mitarika amin'ny fitantanana maharitra kokoa, ny tanàna manan-tsaina no làlana mandroso amin'ny dian'ny post-pandemie. Ny pasipaoro nomerika momba ny vaksinina dia mitohy mamorona lohateny lehibe manerantany ary natao hiantohana ny famerenana amin'ny laoniny ny aretina iraisam-pirenena taorian'ny valan'aretina. Ity fotokevitra ity dia manokatra lalana ho an'ny fifandraisana akaiky kokoa eo amin'ny teknolojia sy ny dia lavitra atsy ho atsy ary ny tanàna mahira-tsaina dia tsy isalasalana fa handray andraikitra lehibe.
Raha ny fanadihadiana natao tato ho ato dia 78% amin'ireo mpamaly no manantena ny hanovan'ny teknolojia ny fomba fanaovany ny asany mandritra ny telo taona. Hisy fiatraikany amin'ny fomba fandehanan'ny olona sy ny zavatra niainany tamina toerana manintona na toerana itodiana.
Covid-19 dia nitondra fotoana bebe kokoa ho an'ny toeran-kaleha hanarenana sy hieritreretana ny politikam-pizahantany, hiasa amin'ny ho avy maharitra kokoa. Fikambanana mpitantana toerana (DMO) maro no nanombatombana ny tsenan'ny fizahantany ary miasa amin'ny fanitsiana ny sarin'izy ireo mba hisarihana ireo “mpizahatany sivily” taorian'ny valanaretina. Ny sasany kosa, na izany aza, dia niasa tamina 'hevitra mahira-tsaina' mba hiantohana ny fitsidihan'ny mpitsidika tsy misy fangarony aorian'ny fandaminana ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fitantanana ny fahaiza-manao rehefa miasa amin'ny maodely fizahan-tany tompon'andraikitra kokoa izy ireo.
Na dia voalaza matetika aza ny foto-kevitry ny 'tanàna marani-tsaina' taloha, ny zava-misy dia misy vitsivitsy ihany ny tanjona miasa mafy manoloana izany. DMO maro no ao ambadiky ny areti-mifindra mialoha ny areti-mandringana. Na izany aza, miaraka amin'ireo orinasa mifantoka bebe kokoa amin'ny fampidirana teknolojia hanatsarana ny traikefan'ny mpitsidika amin'ny alàlan'ny serasera sy ny serivisy 'tsy misy fifandraisana' miaraka amin'ny firotsahana fampiharana marani-tsaina, azo antoka fa misy tombony lehibe kokoa ho an'ireo DMO hampiasa angona amin'ny fitantanana amin'ny ho avy.
Samy Singapore sy Venice dia ohatra tsara amin'ny toeran-kaleha izay miaro ny tombotsoan'ny teknolojia marani-tsaina. Nahazo ny lohateny hoe 'tanàna hendry indrindra eran-tany' ao amin'ny index IMD Smart tanàna i Singapore ary ny Venice dia nanafaingana ny fivoarany tamin'ny Internet of Things (IoT) sy ny fitantanana fahaiza-manao hananganana aretim-pandrenesana matotra kokoa.
Miaraka amin'ireo orinasa mifanaraka amin'ny safidin'ny mpanjifa aorian'ny areti-mandringana, io dia manome fotoana bebe kokoa hiarahan'ny DMO hiara-hiasa amin'ireo tompon'andraikitra eo an-toerana mba hamolavola ny politika momba ny fizahan-tany tompon'andraikitra aorian'ny areti-mandringana.
Fantatra ny vaovao fa ny fandraisan'anjaran'ny mpiombona antoka dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny toerana fizahan-tany. Ny vahaolana teknolojika sy marani-tsaina fotsiny dia hitohy ho zava-dehibe amin'ny dia amin'ny ho avy, fa ny fampifangaroana ny haitao sy ny fiaraha-miasa no anton-javatra roa lehibe izay hitondra any amin'ny fizahan-tany mandray andraikitra bebe kokoa amin'ny tontolo aorian'ny aretina.